eHimalayatimes | अन्तर्वार्ता | मंगलीले भनिन्-ठूलो पर्दामा पनि हनुमानेसँगै
23rd January | 2019 | Wednesday | 8:51:10 AM
मंगलीले भनिन्-ठूलो पर्दामा पनि हनुमानेसँगै
POSTED ON : Monday, 22 January, 2018 (6:58:53 PM)
काठमाडौं । नेपाली टेलिचलचित्र ‘मेरिबास्सै’ बाट दर्शकमाझ चिनिएकी नायिका हुन् रजनी गुरुङ । मेरिबास्सैमा हनुमाने अर्थात् बुद्धि तामाङको श्रीमती मंगली बनेर प्रत्येक साता टेलिभिजन पर्दामा आउँदा दर्शकले उनको अनुहार सहजै चिन्नथाले । अहिले उनी मंगली भएरै विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमका लागि पुग्ने गर्छिन् । रजनीले मेरीबास्सैमा आउनुपूर्व म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ पनि गरेकी छन् । उनले पछिल्लो समय केही ठूलोपर्दाका चलचित्रमा काम गरिसकेकी छन् । स्याङ्जामा जन्मिएर पोखरा बस्दै आएकी २५ वर्षीया मंगली अर्थात् रजनीसँग हिमालय टाइम्सका गोपिकृष्ण चापागाईंले केही संवाद गरेका छन् ।
मेरिबास्सैमा देखिन छाड्नु भो नि, किन ?
अहिले म केही चलचित्रको छायांकनमा व्यस्त छु । त्यसैले गर्दा मेरिबास्सैमा निरन्तर समय दिन भ्याएकी छैन । फेरि मेरो श्रीमान् बन्नुहुने बुद्धिजी पनि काठमाडौंबाहिर चलचित्रकै कामले व्यस्त हुनुहुन्छ । अनि मेरिबास्सैका निर्माता तथा निर्देशक सीताराम दाइ र कुञ्जना दिदी सामाजिक कार्यमा व्यस्त भएकाले हामी पनि टेलिभिजनमा नदेखिएका हौं । अब छिट्टै आउँछौं मंगली र हनुमाने भएर ।
मंगली भनेर चिनाएर मेरिबास्सै छाड्नु भएको त ?
होइन... होइन... । त्यस्तो हुँदैन । मलाई आज रजनी वा मंगली जे भनेर दर्शकले चिन्नुहुन्छ त्यो सबै श्रेय मेरिबास्सैलाई जान्छ । यदि मेरिबास्सैमा म नदेखिएकी भए मलाई दर्शकले यतिसम्म चिन्नुहुन्थेन । आज म यस स्थानमा हुने थिएन, त्यसैले मेरिबास्सै छाड्ने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यही विविध समस्याका कारण हामी निरन्तर टेलिभिजनमा नदेखिएका मात्र हौं । छिट्टै आउँछौं ।
तपार्इंले त चलचित्रमा अभिनय पनि गर्नुभएको छ । कुन–कुन चलचित्र आउँदैछन् । हाल काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
मैले गुरुङ तथा नेपाली दुवै भाषाका चलचित्रमा काम गर्ने अवसर पाएकी छु । गुरुङ भाषाको चलचित्रबाट डेब्यु गरेर पछिल्लो समय प्रदर्शनमा आएको चलचित्र निश्चल बस्नेतको ‘टलक जंग भर्सेस टुल्के’ हो । त्यस्तै भर्खरमात्र चलचित्र ‘मट्टी माला’ को छायांकन सकेर बसेकी छु । टेके पौखरी राईद्वारा निर्देशित यस चलचित्रमा म सँगै बुद्धि तामाङको मुख्य भूमिका छ । त्यस्तै पहिला केही गुरुङ चलचित्रमा काम गरिसकेकी छु । अहिलेको कुरा गर्दा चलचित्र ‘साली कस्को भेनाको’ छायांकनमा व्यस्त छु । यो चलचित्रमा विल्सनविक्रम राई, सुष्मा कार्कीलगायतको अभिनय रहनेछ ।
‘मट्टी माला’ मा सिरियलकै जोडी हुनुहुँदो रहेछ । कसरी जु¥यो यो जोडी चलचित्रमा पनि ?
‘मट्टी माला’ का निर्देशक टेके पौरखी राईले सुरुवातमा मलाई बुद्धिजीसँगको जोडी बनेर अभिनय गर्न अफर गर्नुभयो । हामी दुवैजना राजी भएपछि यो सम्भव भएको हो । टेलिभिजनको पर्दामा दर्शकले मन पराउनुभएको यस जोडीलाई पर्दामा मन पराउनुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौं ।
बुद्धि तामाङ र तपार्इंलाई दर्शकले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि एउटा सिरियलमा श्रीमान् श्रीमती भएर दर्शकमाँझ चिनिएपछि धेरै दर्शकले त्यही कुरा साँच्चै होकि भन्ने पनि बुझिदिनुहुँदो रहेछ । हुन त आजभोलि सिरियल तथा चलचित्रका कथाहरू काल्पनिक हुन्छन् भन्ने धेरै दर्शकले बुझ्नु भा’ छ । कुनै कार्यक्रमको शिलशिलामा जाँदा कतिले सोध्नु पनि हुन्छ तर हामीले त्यस्तो होइन, यस्तो हो भनेर सम्झाउँछौं । कतिले रमाईलोका लागि मात्र भन्नु हुन्छ ।
बुद्धिसँगको रिल लाइफको सम्बन्धले रियलमा कत्तिको प्रभाव पार्छ ?
हामी श्रीमान् श्रीमती त रिलमा हांैं नि ¤ अहिले मानिसहरू धेरै बुझ्ने भइसकेका छन् । त्यसैले रिल लाइफमा मात्र हो यस्तो, वास्तविक जीवनमा यस्तो हुँदैन भन्ने बुझेका छन् । त्यसैले त्यस्तो नकारात्मक प्रभाव पर्दैन । हामी वास्तविक जीवनमा असाध्यै मिल्ने साथी हौं ।
रिलको जीवनमा त श्रीमती भइसक्नुभएको छ तर वास्तविक जीवनमा कसैको श्रीमती हो कि नाइ ?
एकदमै छैन । अहिलेसम्म कसैको भइसकेको छैन ।
चलचित्रको अफर कत्तिको आउँछ ? कसरी छान्ने गर्नुभएको छ ? अनि पारिश्रमिक ?
पछिल्लो समय चलचित्रको अफर आइरहेका छन् । गुरुङ चलचित्र, नेपाली चलचित्रबाट अफर आएका छन् । चलचित्र छान्ने कुरामा चाहिँ स्क्रिप्ट हेरेर आफ्नो भूमिका कस्तो छ त्यो तरिकाबाट एसेप्ट गर्छु । अनि पारिश्रमिकको कुरा गर्दा चलचित्र हेरेर निर्धारण हुन्छ । यति नै लिन्छु भन्ने त हुँदैन । यदि ठूलो व्यानरको चलचित्र छ भने हामीले पारिश्रमिकमा लचकता अपनाउनुपर्छ किनकि आफ्नो करिअरको कुरा हुन्छ । तर कुनै सानो व्यानरको चलचित्रले आफ्नो करिअरमा खासै प्रभाव नपार्ने खालका हुन्छन् त्यस्ता चलचित्रमा लचकता भएर पनि हुँदैन ।